Kwiminyaka embalwa edlulileyo ndapapasha inqaku apho ndibonise indlela yokudibanisa idatha kwi-Excel ukwakha i-traverse nge-AutoCAD, ngaphandle kokwenza yonke iprotocol: @distancia.
Makhe sibone ukuba yintoni ingongoma: Ndinedatha ye-traverse kunye neebheringi kunye nemigama, kwaye ndifuna ukuyakha kwi-AutoCAD okanye kwi-Microstation. Ngaphambili sabona ukuba i-AutoCAD inendlela yayo yokondla olu hlobo lwedatha phantsi kwefomathi @dist<in...
Esi sithuba siphendula u-Diego, waseParaguay, osibuza lo mbuzo ulandelayo: kukuvuyela ukukubulisa… kwixesha elidlulileyo, ngenxa yophando ebendinalo, ngengozi ndize kwiwebhusayithi yakho kwaye ndiyifumene inomdla kakhulu, zombini ngenxa yokuba. ye...
Kwisithuba sangaphambili sibonise ishidi le-Excel ukuguqula i-Geographic coordinates kwi-UTM ukusuka kwiphepha uGabriel Ortiz aye waziwa ngalo. Ngoku makhe sibone esi sixhobo senza inkqubo efanayo umva, oko kukuthi, ukuba...
Le template yenza kube lula ukuguqula ulungelelwaniso lwejografi kwiidigri, imizuzu, kunye nesekondi kwizilungelelanisi ze-UTM. 1. Ukufakwa njani idatha Idatha mayilungiswe kwi-excel sheet, ukwenzela ukuba ize ngefomathi ethi...